Dowladda Federaalka oo lagu leeyahay mushaaraadka dhowr bilood oo aysan bixin | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Dowladda Federaalka oo lagu leeyahay mushaaraadka dhowr bilood oo aysan bixin
Arbaco,October,11,2017(HNN)Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu leeyahay mushaarka dhowr bilood oo aysan bixin, iyadoo uu isa soo tarayo walaaca arrintan laga muujinayo.
Mushaaraadka ka maqan shaqaalaha rayidka dowladda, Ciidamada iyo Xildhibaanada ayaa kala heerar ah, waxaana shaqaalaha rayidka ka maqan mushaarka labo bilood oo ay socoto bishii saddeaxaad.
Sidoo kale Ciidamada Milateriga ayaa waxaa ka maqan mushaarka saddex bilood, bil afaraad oo hada socoto, waxaana mushaar ugu dambeysay bishii Ramadaan ee tagtay.
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ayaa iyana ku doodaya in aanay wax mushaar ah qaadan labadii bilood ee u dambeeyay, waxaa taas sii dheer in Xildhibaanadii baarlamaankii 9aad inay ka maqan tahay mushaarka illaa lix bilood oo sanadkii hore ahaa, taasoo ay qasab tahay in dowladda Madaxweyne Farmaajo inay bixiso.
Inkastoo Xukuumadda Federaalka ay sheegtay inay ku guuleysatay inay bixiso mushaarka shaqaalaha dowladda ayaa hadana waxaa muuqata in labadii bilood ee la soo dhaafay ay ku adkaatay, taasoo loo sababeynayo xaalado kala duwan oo is biirsaday.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo habeen hore ka hadlayay xaflad lagu taageerayay Guddiga taakuleynta Ciidamada ayaa balan qaaday in dhamaadka sanadkan 2017 ay wada bixin doonaan dhamaan Mushaaraadka lagu leeyahay.
“Waxaan rabaa inaan shacabka u sheego meel walba oo ay joogaan in sanadkan 2017 uu ahaan doono sanad qof walba oo dowladda u shaqeeyo ha ahaado ciidan ama shacab, inuu noqon doono sanad mushaar walba la bixiyay, dowladda Soomaaliyana aan lagu yeelan wax deyn ah”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Qaar ka mid ah shaqaalaha rayidka ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay ay niyadooda ay wanaagsaneyd, markii bil walba si joogto ah loo bixiyay mushaaraadka, hase ahaatee labadii bil ee la soo dhaafay ay xaalada ku xumaatay.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dowladda Sacuudiga ay ugu deeqday lacag gaareysa illaa 50 milyan oo dollar, isla markaana lacagahaas ku bixin doonto mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada, hase ahaatee baaritaan aanu sameynay ayaa ku ogaanay in aanay wali ku soo dhicin qasnada dowladda